नेताभन्दा वकिल धेरै सक्रिय: कानुन व्यवसायीलाई भ्याइनभ्याइ ! « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
नेताभन्दा वकिल धेरै सक्रिय: कानुन व्यवसायीलाई भ्याइनभ्याइ !
३ श्रावण २०७३, सोमबार ००:००
काठमाडौं । शीर्ष नेताहरूले आफ्ना सहकर्मीलाई भन्दा बढी कानुन व्यवसायीलाई सक्रिय पारेका छन् । खासमा संविधान के भन्छ र अब कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भनेर नेताहरूले आ–आफ्नो सुविधा हुने गरी कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह लिइरहेका छन् । शनिबार देउवा र प्रचण्डले कांग्रेस र माओवादीनिकट मानिने कानुन व्यवसायीसँग परामर्श लिएका थिए । आइतबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई एमालेनिकट मानिने कानुन व्यवसायीले सल्लाह दिए ।
दुवै पक्षका नेताले अनौपचारिक रूपमा पनि धेरै कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरिरहेका छन् । तर, धेरैजसो कानुन व्यवसायीले नेताकै सुविधालाई मध्यनजर गरेर सल्लाह दिइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताले नै प्रक्रिया कसरी अघि बढिरहेको छ भनेर थाहा नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा आइतबार सभापति शेरबहादुर देउवानिवास पुगेको टोलीले आफूहरूलाई केही पनि थाहा नदिएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेको थियो । देउवाले अब सल्लाह गरेर अघि बढ्ने बताए । त्यस्तै माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठसमेतले असन्तुष्टि जनाएपछि आइतबार बसेको बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले अब शीर्ष सबैसँग सल्लाह गरेर अघि बढ्ने बताएका छन् ।
उता सरकार बचाउने प्रयासमा लागेका प्रधानमन्त्री ओलीले पनि माधव नेपाल समूहका नेताहरूलाई भूमिका दिएका छैनन् र खासै सल्लाहसमेत गरेका छैनन् । एउटै संविधानको फरक–फरक व्याख्या भइरहेकाले राजनीति अन्योलमा फसेको आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
प्रकाशित मिति: Jul 18, 2016
एन्फा अध्यक्ष नेम्वाङलाई फिफा अध्यक्ष जियानीको बधाई तथा शुभकामना
अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का नवनिर्वाचित अध्यक्ष पंजकविक्रम नेम्वाङलाई विश्व फुटबल महासंघ फिफाका अध्यक्ष
मकै बारीमा आमाको हत्या गर्ने छोरा पक्राउ
आफ्नै आमा माडी नगरपालिका–६ स्याउलिवास बस्ने ५५ वर्षीय माया देवी तामाङको हत्या गरेको अभियोगमा ३७
जैशीदेवल तेक्वान्दो डोजाङका खेलाडीले इन्डिया ओपन कुकिवन डिस्प्याच अन्तर्राष्ट्रिय तेक्वान्दो प्रतियोगतामा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने भएका
कोटेश्वरमा माइक्रो बसको ठक्करबाट पैदलयात्रीको मृत्यु, चालक फरार
काठमाडौंको कोटेश्वरमा हिजो बेलुकी माइक्रोबासको ठक्करबाट एक जना पैदलयात्रीको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुने
महिला रेफ्री अञ्जना राई एसियाली फुटबल महासंघ एएफसी एलिट महिला रेफ्री र सहायक रेफ्री प्यानल